के हो ‘कार्डिएक अरेस्ट’ जसले सुष्मा स्वराजको ज्यान लियो, बच्ने उपाय पढेर सक्दो शेयर गराै – ताजा समाचार
के हो ‘कार्डिएक अरेस्ट’ जसले सुष्मा स्वराजको ज्यान लियो, बच्ने उपाय पढेर सक्दो शेयर गराै
भारतीय पूर्व विदेश मन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीकी वरिष्ठ नेता सुष्मा स्वराजको निधन कार्डिएक अरेस्टका कारण भएको हो । कार्डिएक अरेस्ट एक प्रकारको ‘हर्टअट्याक’ हो ।
कार्डिएक अरेस्ट के हो ? जो मानिसको शरीरका लागि खतरनाक बन्न जान्छ । र यो हार्ट फेल या हर्टअट्याक भन्दा कसरी फरक हुन्छ ?
मुटु सम्बन्धी वेवसाइट हार्ट डट् ओआरजीका अनुसार कार्डिएक अरेस्ट अचनाक हुन्छ र शरीरलाई यसले कुनै चेतावनी दिँदैन । यसको कारण आम रुपमा मुटुमा हुने इलेक्ट्रोनिक गडबडी हो जसले मुटुको चालको तालमेल बिगारिदिन्छ । यसबाट मुटुमा पम्प गर्ने क्षमतामा असर हुन्छ र यसले दिमाग, मुटु या शरीरको दोस्रो भागमा रगत पठाउन सक्दैन ।
यो भएको केही पलमा नै मानिस बेहोस हुन जान्छ । यदी सही समयमा उपचार मिलेन भने कार्डिएक अरेस्टले आक्रमण गरेको केही सेकेन्ड वा मिनेटमा नै मानिसको ज्यान जान्छ ।
ब्रिटिश हार्ट फाउन्डेशनका अनुसार मुटुमा इलेक्ट्रोकल सिग्नलको समस्या शरीरमा जब रगत पु¥याउन असमर्थ हुन्छ तब कार्डिएक अरेस्टको स्वरुप लिन्छ । जब मानिसको शरीर रगत पम्प गर्न बन्द हुन्छ तब दिमागमा अक्सिजनको कमी हुन जान्छ ।
यस्तो हुँदा मानिस बेहोस हुन्छ र स्वासप्रश्वास समेत बन्द हुन्छ ।
लक्ष्यण देखिँदैन ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या नै कार्डिएक अरेस्ट हुनुभन्दा पहिला कुनै लक्षण देखिदैन ।
यही कारण हो कि कार्डिएक अरेस्ट हुनासाथ मृत्युको खतरा कयौं गुणा बढ्न जान्छ ।
यसको सबैभन्दा सामान्य कारण असाधारण हार्ट रिदम भनिन्छ जसलाई विज्ञानको भाषामा वेट्रिकुलर फिब्रिलेशन भनिन्न्छ ।
मुटुको इलेक्ट्रिकल गतिविधि यति धेरै विग्रन्छ कि चाल बन्द गरिदिन्छ र एक खालको कम्पन हुन्छ ।
कार्डिएक अरेस्टको धेरै कारण हुन सक्छ तर मुटुसँग जोडिएका केही विरामीमा यसको आशंका बढ्न जान्छ
जो यसप्रकार छन् ।
कोरोनरी हार्टको विरामी
कान्जेनिटल हार्टको बिरामी
हार्ट भल्भमा समस्या
हार्ट मसलमा इनफ्लेमेशन